1 KORINTIANA 9.1-14 F. 2 | Fitandremana Ankadifotsy
1 KORINTIANA 9.1-14 F. 2
MAHAZO FIVELOMANA AVY AMIN’NY FILAZANTSARA
Ny momba an’ny Paoly. Misy ireo tsy mino fa apostoly i Paoly nefa izy dia efa nahita an’i Jesoa Tompo tokoa (Asa 9.1-9). Te hamaly ny fanontanian’ireo mpanenjika azy Paoly teto. Ny fiangonana izay naorin’i Paoly dia nahitana finoana sy vokatra ara-panahy marina. Ireo dia efa porofo mivaingana ny amin’ny asany amin’ny maha Apostoly azy. Eto koa dia toa mitanisa izay mety ho zony koa amin’ny maha apostoly azy i Paoly, manomboka amin’ny (4) : Mananjo hihinana sy hisotro, afaka mitondra vady mpino ny Apostoly, Tsy midika nefa izany hoe nanambady Paoly.
Manana endrika mitaky ny zony mihitsy i Paoly eto. Hoy izy eo amin’ny (11-12) “Raha izahay namafy izay zava-panahy ho anareo, dia zavatra lehibe va raha mba mijinja izay anananareo araka ny nofo kosa izahay? Raha ny hafa aza manana izany fehefana izany aminareo, tsy mainka va fa izahay?”
Tsy tokony hanararaotra. Na izany aza eo amin’ny andininy 12b izy dia maneho fa tsy manapatra izany fahefana izany fa mihafy amin’ny zavatra rehetra fandrao hisakana ny Filazantsaran’i Kristy. Raha ny tokony ho izy mantsy ary efa tahaka izany rahateo ny fanao tany amin’ny Testamenta Taloha ; tokony ahazo fivelomana avy amin’ny filazantsara ireo mpitory ny filazantsara (14), efa nambaran’i Jesoa ao amin’ny Matio 10.10 koa izany “…Fa ny mpiasa dia miendrika hahazo ny haniny”
Aiza ho aiza amin’ny toetran’i Paoly ny mpitondra fivavahana maro misy ankehitriny?
Misy toa mitaky fatratra ny ampahafolonkarenan’ireo mpino ao aminy ary raha tsy manao dia heverina tsy hahazo fitahiana ara materialy. Mila mitandrina isika fandrao ny fihetsika toy izany no hampihemotra ny finoan’ny ondry kely izay tarihana.